musha Oceania David Warner Zvekurera Nyaya Yechidiki uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yekanzuru yeAustralia ine zita rezita "Mufundisi". Yedu David Warner Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanobudirira vanorova muIndia Premier League. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga David Warner's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
David Warner Upenyu hwepakutanga uye Yepamberi Yemhuri:
Kutanga kubva, David Andrew Warner akaberekwa pazuva re27th saGumiguru 1986 mudunhu reSydney rePaddington muNew South Wales, Australia. Iye aive wechipiri wevana vaviri akazvarwa kuna amai vake, Sheila Warner uye kuna baba vake, Howard Warner.
Nyika yeAustralia yerudzi rwevachena ine midzi midiki isingazivikanwe akarererwa kwaakaberekerwa muPaddington kwaakakurira pamwe chete nemukoma wake, Steven Warner. Kukura muPaddington, Mudiki David aive pendi uye anofarira Cricket uyo aive nehudiki hwakaoma nekuda kwekutadza kwevabereki vake kuzadzisa zvaaida.
Nekuda kweizvozvo, aive neruzivo rwekutanga-ruoko rweizvo zvaireva kuzvarwa mumhuri yepasi-soro pamwe nekudiwa kwekushandira kuwana chero chaaida. Panguva iyo David aive akura gumi, baba vake vakakwanisa kumupa bat yake yekutanga - yakaderera bhajeti SS Jumbo bat - uye akarairwa kuti arege kutyora nekuda kwekushaikwa kwemari yekutsiva mumwe.
Keith Urban Childhood Nyaya yezve Untold Biography Facts
David Warner Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Nezve kumashure kwedzidzo yaDavid, akaenda Matraville Veruzhinji Chikoro muNew South Wales Australia asati aenderera mberi nekudzidza kuRandwick Boys High Chikoro chiri muRandwick, Australia.
Ndichiri kuRandwick Boys High, David akarairwa nemurairidzi wake wechikoro kuti arove neruoko rwerudyi kuitira kuti arege kurova bhora mudenga. Nekudaro, David akasarudza zano raamai vake ndokuenderera mberi nekurova neruoko rwake rweruboshwe. Nguva yacho yakamuonawo achitanga chikamu-chenguva achishanda pashopamaketi / muzvitoro zvegirosari kuti awane mari muhomwe.
David Warner Pakutanga Yekuita Hupenyu:
David aive achiri mudzidzi weRandwick Boys High paakatanga kutamba makirabhu anosanganisira kirabhu yeEastern Suburbs pamwe neSydney Coastal uko kwaakatyora rekodhi rekirabhu revatambi vepamusoro-gumi nevatanhatu.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hapana marekodhi aripo ezve kubatanidzwa kwaDavid mukiriketi pakati pemakore 2003 - 2007 panguva yekunyora. Zvakangodaro, zvinofungidzirwa kuti akafamba zvakanaka kwazvo mumutambo mukati memakore, kunyanya mukuona kwezvaakaita meteoric zvazvakazoitika.
David Warner Road To Fame Nhau:
2008 raive iro gore iro David akatanga kutamba kirabhu yepamba yeNew South Wales. Mwedzi yakatevera, akadaidzwa kuti atambe mitambo yekune dzimwe nyika kuchikwata cheAustralia pasina ruzivo mumutambo wekiriketi wekutanga.
Zvisinei, akabvuma kupokana uye akachinjira kuchinhanho chake kutsiva nekurova 89 kubviswa 43 mabhora ane 7 mana uye 6 sixes kusanganisa kubvisa iyo yechipiri-inokurumidza makumi mashanu muNhau makumi maviri yeNNUMX International.
David Warner Anosimuka Kumukurumbira Nyaya:
Asina kuzorora pamaOars ake, David akavandudza fomu yake kumitambo yese yasara muna2009 uye akazobudirira muna 2010. Hazvina kutora nguva David asati aratidzira kukosha kwake nekuita kwake kutanga kweTest panguva yekukunda kuzorwa neNew Zealand muna Zvita. 2011.
Nekukurumidza kusvika nhasi, David anoonekwa semumwe weanoparadza batsman uye anopokana zvakanyanya muchikwata cheAustralia nezvaakawana kuita zvichangotanga kubva muna 2017 paakazova munhu wekutanga batsman weAustralia uye wechigumi nemana batsman kuzara zana Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
David Warner Hukama Hupenyu:
David Warner akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana uye iye zvino hukama. Kutanga neizvozvo, iye Cricketer weVanozivikanwa haazivikanwe kuti akamboita mukadzi chero iye asati asangana nemukadzi wake Candice Warner. Candice anoshanda pamudyandigere kuAustralia achimboita simbi uye anosevenzesa hupenyu. Aive zvakare mukuenzanisira uye akaonekwa mune mamwe makaterevhizheni.
Vakaroorana avo vakatanga kufambidzana pamberi pe2013 vakapfuurira kutora mhiko ye "pamwe nekusingaperi" mu2015 uye vachiri vakaroora panguva yekunyora. Imba yavo inokomborerwa nevanasikana vatatu. Ivo vanosanganisira Ivy Mae Warner (akazvarwa 2014), Indi Rae Warner (akazvarwa 2016) uye Isla Rose (akazvarwa 2019).
David Warner Hupenyu hwemhuri:
David Warner anobva kumhuri yepasi-yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve David Warner baba:
Howard Warner ndibaba vaDavid. Akashanda mumishini inorema panguva yehupenyu hwaDavid achiri mudiki kusvika cricketer yakwira mukurumbira ndokumukumbira kuti arege basa. Ivo baba vevaviri vanoonekwa sevanoshanda nesimba uye vanozivikanwa nekutora David rake rekutanga bat. Howard agara aine hukama hwakanaka naDavid uye wekupedzisira haamboregi kumugamuchira seakakosha pesvedzero muhupenyu hwake.
Nezve amai vaDavid Warner:
Sheila Warner ndiamai vaDavid. Akashanda semukoti anochengeta vakwegura panguva yaDavid achiri mudiki uye anga ave ave mubasa kwemakore anodarika makumi matatu. Sheila ari padyo nevanakomana vake kunyanya David uyo anomupa mbiri yekumudzidzisa maari tsika yekuwana mari yake.
Nezve hama dzaDavid Warner:
David haana hanzvadzi asi mukoma mukuru anonzi Steven. Kufanana naDavid, Steven aive nekutanga zvaifarira mukiriketi. Muchokwadi, aive nyeredzi junior mumutambo uyu asati aregera. Akazove ari pombi nekutengesa uye akashanda semidziyo yekutakura nemhandara Australia. Zvisineyi, Steven ndewekukurudzira kukuru kuna David uyo aanogaro kuraira kutora Cricket zvakakomba.
Nezve David Warner Voukama:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaDavid, zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake pamwe nasekuru nasekuru naambuya. Ane babamunini vakatumidzwa zita rekuti Patty apo pasina marekodhi evatete vake, babamunini pamwe nababamunini. Saizvozvo, hama dzaDavid hadzina kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
David Warner Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti David Warner akanganise? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kwehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, David persona musanganiswa weScorpio zodiac maitiro.
Iye mutserendende, pachena, anodakadza uye haana nyaya dzinoburitsa pachena zvine chekuita nehupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Iye ane mashoma pane mamwe mafaro anosanganisira kufamba, gorofu, kushambira, kutasva mabhiza uye kunyora.
David Warner Mararamiro
David Warner ane mari inofungidzirwa kuti inosvika $ 9.9 mamirioni panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwenyika yekiriketi kunobva pamubhadharo muhombe waanowana pamwe nemabvumirano emiromo-anodiridza.
Nekudaro, haana matambudziko nekutambisa mari mukuwedzera nzvimbo yake yemidziyo inosanganisira dzimba dzinopararira munzvimbo dzeAustralia. Zvikuru, David ane rudo rusingaperi rwekukurumidza anomhanyisa sezvo muunganidzwa wake wemotokari unozvirumbidza nemotokari dzinosanganisira Lamborghini Huracan uye McLaren mota yemitambo.
David Warner Untold Chokwadi:
Kuputira, heino asina chokwadi kana mashoma-anozivikanwa chokwadi asina kuisirwa muBio yake.
David anonamata nekuchengetedza in-isina ganda. Nekudaro iye haana ma tatto panguva yekunyora futi haaputi. Nekudaro, anonwa doro zvine mwero.
Kure nekutamba kiriketi, David muchengeti akangwara uye mugovani akakosha muAustralia Pure Tasmanian Vodka '666'.
David Warner akapihwa gore rakarambidzwa kutamba kiriketi mu2018 mushure mekunge awanikwa achiziva gora-rekutamba bhora rakaurayiwa nemumwe waanoshanda naye, Cameron Bancroft. Nekudaro, iye akashandira kurambidzwa uye akadzoka kuchikwata cheAustralia panguva yekunyora.
Iyo cricketer zvakare munyori uye anodada munyori webhuku 'Iyo Kaboom Kid' akateedzana.
Nezve chitendero chake, David akazvarwa uye akarerwa saChristain. Zvisinei, achiri kuzobvisa kusahadzika kana ari mutendi kana kuti kwete.
Thanks for reading vedu David Warner Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Yeudiki Biography Diary- yeMurume Cricketer